Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Mweghachi njem njem ikuku nke Europe dara
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ na -agbasa na Greece • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mba nke kacha njọ bụ ndị na -atụkwasịkarị anya na njem njem ogologo oge, dịka France na Italytali na ndị nke machibidoro mmachi njem dị egwu dịka UK, nke dara na ala nke ndepụta ahụ, na -enweta naanị 14.3% nke Ọkwa 2019.
Njem ụgbọ elu Europe n'oge okpomọkụ ruru 39.9% nke ọkwa ọrịa na-efe efe.
Ejikọtara foto a, ebe ụfọdụ na -eme nke ọma karịa ndị ọzọ.
Akwụkwọ ntinye akwụkwọ agbadala ruo ngwụcha oge ọkọchị.
Nchọpụta ọhụrụ na-ekpughe na ụgbọ elu mba ofesi na-aga ebe ndị Europe na July na Ọgọst ruru 39.9% nke ọkwa ọrịa na-efe efe. Nke a dị mma karịa afọ gara aga (nke bụ 26.6%), mgbe ọrịa COVID-19 kpatara mkpọchi mkpọsa; a kwadobeghịkwa ọgwụ mgbochi ọrịa.
Agbanyeghị, foto a gwakọtara ọnụ, ebe ụfọdụ na -eme nke ọma karịa ndị ọzọ. Ọzọkwa, atụmanya anaghị adị mma, ebe ọ bụ na ntinye akwụkwọ na -agbada na njedebe nke oge ọkọchị.
Ilele arụmọrụ mba, Greece bụ ihe pụtara ìhè. Ọ nwetara 86% nke mbata nke ọnwa Julaị na Ọgọstụ na 2019. Saịprọs sochiri ya, nke nwetara 64.5%, Turkey, 62.0% na Iceland, 61.8%. Gris na Iceland bụ otu n'ime mba izizi kwupụtara na ha ga-anabata ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi yana/ma ọ bụ nwee ike igosi ule PCR na-adịghị mma yana/ma ọ bụ nwee ike igosi ihe akaebe na ha gbakere na COVID-19.
Mba nke kacha njọ bụ ndị na -atụkwasị obi na njem njem ogologo oge, dịka France na Italytali na ndị tinyere mmachibido njem njem siri ike dịka UK, nke dara na ala nke ndepụta ahụ, na -enweta naanị 14.3% nke ọkwa 2019.
Ewezuga ndị na-ebu ọnụ dị ala, ụgbọ elu intra-Europe mejupụtara 71.4% nke ndị bịarutere, ma e jiri ya tụnyere 57.1% na 2019. Mwepu nke ndị ọbịa ogologo njem, nke na-anọkarị ogologo oge, na-etinyekwu ego ma tinye uche ha na obodo na nlegharị anya. akowara na ọkwa nke ebe kacha mma na nke kacha arụ ọrụ mpaghara.
Ịga London bụ ihe na -akụda mmụọ karịsịa; ọ nọ na ala nke ndepụta obodo Europe kacha ekwo ekwo, na -enweta naanị 14.2% nke ndị bịarutere 2019. Ndepụta ndepụta ahụ bụ Palma Mallorca, bụkwa isi ebe njem osimiri, na -eru 71.5% nke ọkwa 2019 yana site Athens, ọnụ ụzọ ọtụtụ agwaetiti na Adriatic, na 70.2%. Obodo ndị ọzọ kacha eme nke ọma bụ Istanbul, 56.5%, Lisbon, 43.5%, Madrid, 42.4%, Paris, 31.2%, Barcelona, ​​31.1%, Amsterdam, 30.7%na Rome, 24.2%.
Site na ntụnyere, ebe ntụrụndụ bịara bụrụ nke na -adịte aka. Ọkwa ọkwa ebe isi obodo niile (ya bụ: ndị nwere oke ahịa karịa 1%) bụ ebe ezumike ezumike n'oké osimiri ọdịnala ma ọ bụ ọnụ ụzọ mbata ha. Ndị ndu ahụ bụ Heraklion na Antalya, nke gafere ọkwa ọrịa tupu ọrịa ebido site na 5.8% na 0.5% n'otu n'otu. Thessaloniki sochiri ha, 98.3%; Ibiza, 91.8%; Larnaca, 73.7% na Palma Mallorca, 72.5%.
Ewezuga ọnọdụ macro, ụfọdụ ebe na -akacha mma ma ọ bụ ka njọ maka ebumnuche ndị akọwapụtara na mpaghara. Dịka ọmụmaatụ, Portugal, nke bụ ebe ndị ezumike UK na -amasịkarị, tara ahụhụ mgbe UK gbanwere aha ya site na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gaa amba na June; na Spain tara ahụhụ na ngwụsị July mgbe Germany dọrọ aka na ntị megide njem niile dị mkpa.
Mgbe mmadụ tụlere etu ihe egwu si mee njem nlegharị anya na Europe n'afọ gara aga, oge ọkọchị a bụ akụkọ mgbake dị ala. Edebere akara megide oge nkịtị, obere njem ụgbọ elu mba ofesi, na -erughị 40% nke nkịtị, na -emebi nnukwu ụlọ ọrụ ụgbọ elu. Ọbịbịa ọnụnọ nke ndị njem ogologo oge, ọkachasị site na Far East (ọ ruru naanị 2.5% nke oke ọrịa na-efe efe n'oge ọkọchị a) ga-abụ nnukwu nsogbu akụ na ụba onye ọbịa nke ọtụtụ mba Europe.
Ọ bụrụ na enwere ihe nkasi obi, ọ bụ ndị mmadụ “na -anọ ezumike”, ya bụ: ịga ezumike n'obodo ha. Ọ bụ ezie na ụgbọ elu ụlọ nwere oke pere mpe nke ahịa na Europe n'oge ọ na -adịkarị, ọ jigidere nke ọma n'oge ọrịa na -efe efe n'ihi na enwetabeghị ụdị mmachi njem a siri ike. Dịka ọmụmaatụ, ndị Canary na Balearics nabatara ndị ọbịa si Spain karịa ka ha na -eme n'oge nkịtị.